Duqa Muqdisho ‘Cumar Filish’ oo dalka dib ugu soo noqday | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Duqa Muqdisho ‘Cumar Filish’ oo dalka dib ugu soo noqday
Duqa Muqdisho ‘Cumar Filish’ oo dalka dib ugu soo noqday
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Axaddii maanta dib ugu soo laabtay Caasimadda dalka, kadib markii maalmihii la soo dhaafay uu ku maqnaa dalka Turkiga.
Duqa Muqdisho ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Guddoomiye ku-xigeenadiisa, Wasiirro, Xildhibaanno ka tirsan labada Golle ee Baarlamaanka, Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka iyo xubno kale.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa marka hore ka mahaceliyay soo dhaweynta loo soo sameeyay, isagoona intaas kadib ka hadlay howlihii la qabtay inta uu safarka ugu maqnaa Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Sidoo kale wuxuu bogaadiyey shaqadii la qabtay intii uu maqnaa, waxa uuna u mahadceliyey Ra’iisul Wasaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo ku-xigeenadiisa Maamulka Gobolka Banaadir.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa muddooyinkii dambe ku maqnaa dalka Turkiga arrimo la xiriira xaaladiisa caafimaad.
Cumar Filish oo dalka dib ugu soo noqday